10 ugu caansan steroids steroids Raws Materi | AASraw Steroids
Posted on 07 / 18 / 2019 by Dr. Patrick Young ku qoray Gallery.
Marka loo eego saldhiggeena xogta iibka ee 4 sano ee la soo dhaafay iyo weydiimaha kala duwan, waxaan soo koobnay 10 ugu caansan steroids anabolic steroids (AAS) ashyaa ceyriin loogu talagalay sheybaarada la xiriira, iibiyaasha iyo macaamiisha.
Waxaan hoos u dhignay seddexda wershadood ee ugu sarreysa ee agabka warshadeed. Liis buuxa, fiiri 10 ugu sarreeya caan steroids anabolic steroids waxyaabo cayriin ah.
Isugeynta Guud ee Iibka AAS Raws sheyga: Helitaanka Bulkarka ugu Wanaagsan ee Waxyaabaha Ugu Yar ee La isku duro ee AAS Raws material: Guud ahaan ugu Wanaagsan ee Afka AAS ah Waxka Bixinta:
Testosterone Enathate / Testo E / Tijaabada E budada
Rating:★★★★★ Trenbolone Acetate / Tren Ace / Tren A budada
Rating:★★★★★ Budada Methandrostenolone / Dianabol budada
Iibka ugu weyn ee alaabta AAS ceeriin naga ah
Nooca ugu fudud uguna jaban AAS ceyriin
Budada cayriin ee Trenbolone Acetate way ka xoog badan tahay Trenbolone Enanthate sababtoo ah Enanthate ester waxay qaadataa tiro badan xarunta.
Inta badan isticmaaleyaashu marka ugu horreysa ee ay la socdaan hormoonka Trenbolone had iyo jeer waa budada cayriin ee Trenbolone Acetate.
Dinandrol waxay noqon kartaa mid faa iido u leh dhismaha ballaaran.
Saamaynta Daandrol way fududahay in la qabsado mar la isticmaalo waa la joojiyaa marka la barbar dhigo steroids.
Waa kuwan Kuwa Ugu 10 Caanood ee Anabolic Steroids Cayriis:
Testosterone Enathate budada cayriin - Inta badan Isugeynta Caadiga ah ee Isugeynta Dheerooyinka steroids
Budada cayriin ee Methandrostenolone - Badanaa Guud ahaan Calool-Weynaha afka ee Caadiyan
Trenbolone Acetate budada cayriin - Guud ahaan Steroids durida awood badan
Oxandrolone budada ah - Isticmaalka isugeynta daawada jirka ee dumarka guud ahaan caan ka ah
Foosto ceeriin ah Stanozolol - Badanaa Guud ahaan Caabuqa Caloosha ku Jirta ee Caloosha ku Jirta
Hormoonka Koritaanka Aadanaha - Guud ahaan Guud ahaan Caadiga Peptide ee Caanka ah
Nandrolone Decanoate budada cayriin - Inta badan isugeynta steroids jirka ee hooseeya
Boldenone Biyo dareere ah - Inta badan Isku-darka steroid-ka-shaqeysiinta dheer
Budada cayriin ee Drostanolone Propionate - Inta badan Isugeynta steroids Exotic steroids
Budada cayriin ee Methenolone Enanthate - Badanaa Isugeynta Dhibaatooyinka Ka Soo Baxa Isugeynta steroids
Waxaa jira dhowr tilmaamood oo muhiim ah oo loo baahan yahay in la raadsado markii la dooranayo steroids Anabolic. Shaybaarrada, waxyaabaha caanka ah waxay u baahan yihiin in lagu sameeyo kiniinno ama kaabsal. Qalabkaani wuxuu noqon doonaa mid lagu qaso, kaniiniga lagu cadaadiyo, mashiinka kaabsalida, mashiinka daboolka, iwm. Qalabka noocan ahi waa qaali laakiin wuxuu ka caawin doonaa dhisida magacyadaada iyo kasbashada ganacsi muddo dheer ah.
Steroids afka laga qaato:
Oxandrolone (Anavar) budada cayriin
Stanozolol (Winstrol / winny) budada cayriin
Methandrostenolone (Dianabol) budada cayriin
Steorids la isku duro
Inta badan taxanaha Testosterone
Inta badan taxanaha Boldenone
DIY iyo Homebrewer
Isukeeniska (DIY) kariyeyaasha guryaha ayaa ka wanaagsan in laga bilaabo steroids fudud, kaaso dhibic yar iyo dhalaal dareeraha dareeraha ah. Steroids-ka lagula taliyay waxaa laga heli karaa sida hoosta:
Qalitaanka tijaabada kambiyuutarka
Budada cayriin ee Nandrolone Decanoate (DECA)
Budada Nandrolone phenylpropionate / NPP budada
Trenbolone Enanthate budada
Trenbolone Acetate budada cayriin
Boldenone Undecylenate / Equipoise dareere ceyriin ah
Budada Drostanolone / Masteron Enanthate
Budada Drostanolone / Masteron Propionate
Budada cayriin ee Testosteorne Enanthate Budada cayriin ee Methandrostenolone Trenbolone Acetate budada cayriin Oxandrolone budada ah Foosto ceeriin ah Stanozolol Hormoonada Horumarka Aadanaha Nandrolone Decanoate budada cayriin Boldenone Biyo dareere ah Budada cayriin ee loo yaqaan 'Drostanolone Propionate' Budada cayriin ee Methenolone Enanthate
1. Budada cayriin ee testosterone Enanthate
Budada cayriin ee testosterone Enanthate waa testosterone saafi ah oo leh ester gaabis ah oo jilicsan oo muddo dheer ku xiran waana testosterone caan ah. Sida nooca Propionate waa mid ka mid ah qaababka ugu caansan ee adduunka looga isticmaalo waxqabadka kor u qaadista cayaaraha. Marka loo eego sifooyinka shaqeynaya ee Testosterone Enanthate, natiijooyinka saxda ah ee isku midka ah ayaa guud ahaan laga heli doonaa marka la barbar dhigo qiyaasta qiyaasta Propionate ee qiyaasaha qiyaasaha inay la mid yihiin.
2. Budada cayriin ee Methandrostenolone
Budada cayriin ee Methandrostenolone waxay ka dhigan tahay mid ka mid ah kuwa ugu caansan iyo mid ka mid ah steroids anabolic-ka ugu muhiimsan waqti kasta. Su'aal la'aan, kani waa steroid caan ah oo caan ah oo waligiis suuqa lagu dhufto iyo mid ka mid ah steroidsyada ugu caansan nooc kasta. In kasta oo had iyo jeer loo arkaa kiniin afka ah, budada budada cayriin ee Methandrostenolone waxaa loo heli karaa xalka lagu duro, laakiin kiniinadu waxay matalaan wadada koowaad ee maamulka.
3. Budada cayriin ee Trenbolone Acetate
Eetate ester waa ester-silsilad aad u gaaban oo kuxiran molecule Finaplix. Waxay leedahay nolol firfircoon oo ah maalmo 2-3 laakiin si loo ilaaliyo heerarka dhiigga ee trenbolone oo sarreeya iyo joogto ah, irbadaha maalinlaha ah ayaa badanaa lagu taliyaa. Acetate ester wuxuu siiyaa deg deg iyo uruurin sare ee hoormoonka kaasoo faa iido u leh kuwa raadinaya guulo deg deg ah, oo ay weheliso waqti sifeynta deg deg ah ee loo yaqaan 'acetate ester' waa laga joojin karaa bilawga waxyeelada xun.
4. Budada cayriin ee 'Oxandrolone'
5. Stanozolol budada cayriin
In kasta oo mid ka mid ah steroids anabolic-ka aadka loo yaqaan, budada cayriin Stanozolol ay aad caan ugu tahay inta badan steroidka iyadoo la adeegsanayo dadka. Waxay ku jirtaa siyaabo badan steroid anabolic dhexdhexaad ah oo si nabdoon ay u isticmaali karaan ragga iyo haweenka. Sidoo kale waa muhiim, waxay xaqiijisay inay si wax ku ool u tahay dadaallada kor u qaadista waxqabadka badan.
6. Hormoonka Koritaanka Aadanaha
7. Nandrolone Decanoate budada cayriin
Budada cayriin ee Nandrolone Decanoate waa mid ka mid ah steroids anabolic ee inta badan la isticmaalo inta udhaxeysa kor u qaadida ciyaaraha. Waxaa caan ah inay si weyn waxtar ugu leedahay steroid mass-xilli-ka-baxsan, laakiin sidoo kale waa mid lagu jecel yahay goobo badan oo ciyaaraha fudud ah faa'iidooyinkeeda daweynta ah. Sababtoo ah faa'iidooyinkeeda daaweyn ee weyn, hoormoonka Nandrolone waa mid ka mid ah steroids anabolic-ka ugu waxtar badan dhaqanka caafimaadka
8. Boldenone Biyo dareere ah
Dareeraha ceyriinka ee Boldenone Undecylenate waa testosterone laga soo saaray steroid anabolic androgenic ah waana qaab qaab dhismeedka loo beddelay ee testosterone. Waa isbeddel aad u yar oo ku daraya isku-darka labajibbaarada kaarboon hal iyo laba boos. Undesterlenate ester wuxuu u oggolaanayaa sii deynta ugu sarreysa ee Boldenone qiyaastii 3-4 maalmood ka dib mudista, iyadoo si tartiib tartiib ah loo sii daayo hoormoonka si loogu raaco qiyaastii maalmaha 21.
9. Budada cayriin ee loo yaqaan 'Drostanolone Propionate'
Inta badan dhammaan Masteron suuqa waxay noqon doonaan budada cayriin ee Drostanolone Propionate. Budada cayriin ee Drostanolone Propionate waa dihydrotestosterone (DHT) oo laga helo steroid anabolic. Gaar ahaan, Masteron waa hoormoonka DHT ee qaab ahaan loo habeeyay iyadoo lagu daray koox methyl ah oo ku jirta kaarboonka 2, Tani waxay ka ilaalinaysaa hormoonka inuu ka baxo dheef-shiid kiimikaadka iyadoo loo yaqaan '3-hydroxysteroid dehydrogenase enzyme,' oo laga helo muruqyada lafaha. Waxay sidoo kale si weyn u kordhineysaa dabiiciga anabolic hormoonka.
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan dadkaas ayaa la tartamaya ama raadinaya jismi qurxin badan
10. Budada cayriin ee Methenolone Enanthate
Budada cayriin ee Methenolone Enanthate waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah steroids anabolic-ka ugu ammaansan ee suuqa waana waxay leedahay qiimeyn nabadgelyo oo heer sare ah si dib loogu celiyo sheegashadan. Xaqiiqdii, steroidkan waxaa loo isticmaalay si guul leh si loogu daaweeyo carruurta miisaankoodu culus yahay iyo dhallaanka aan dhalan ee aan dhaawaca lahayn. Waxaa sidoo kale loo qoondeeyey osteoporosis iyo sarcopenia.
Genius AAS Raw isha waa in laga fiirsadaa kahor iibsashada
Marka ay timaado alaabta ceeriin ee soosaarka steroid, qaar badan ayaa isla markaaba fiiro gaar ah u leh wax soo saarka ku yaal Shiinaha. Waa tan alaabada ceyriinka soosaarka ee loosoo gaabiyo loo dhoofiyo wadamo kale. Waxyaabaha cufan ee loogu talagalay steroids ka Shiinaha ayaa caan ku ah dhowr sababood:
Waxay ku sugan tahay Shiinaha inay leedahay tayo sare.
U hoggaansanaanta dhammaan heerarka.
Joogitaanka rukhsadaha wax soo saarka iyo iibinta.
Budada dabiiciga ah iyo tan asalka ah, taas oo horeyba loogu isticmaali karo wax soo saarka.
Qodobka ugu dambeeya ee soo-saareyaasha badan ee steroids-ka ayaa ah kuwa ugu muhiimsan. Tani waa sababta oo ah waa sida ugu fudud ee loo maro ka soo iibso alaabooyinka ceyriin ee steroids ka iibsato Shiinaha. Waxaa jira shirkado badan oo ku lug leh iibinta halkan, umana baahna in la keeno dukumiinti dheeraad ah oo loogu talagalay alaabada iibka. Tan macnaheedu maahan in Shiinaha aad ka iibsan karto alaabta ceeriin ee wax soo saarka guriga. Maya, waxa jira warshado waaweyn iyo shirkado iibiya badeecado si gaar ah u saarayaasha soo saarayaasha. Iibso ogolaansho ku filan wax soo saar iyo dhowr shahaadooyin tayo leh.
Shirkadaha qaar waxay u baahanyihiin dukumentiyo dheeri ah, sidaa darteed intaadan iibsan budo soosaara steroids, waxaa fiican inaad la xiriirto shirkadda oo aad weydiiso dukumiintiyada loogu baahan yahay. Kaliya tan ka dib, alaabta ceeriin ee steroids ka Shiinaha laga iibsan karo oo la keeni karo dalka halkaas oo soo saarka diyaarinta steroid-ka androgenic steroid.
Laakiin, sheybaarada dhulka hoostiisa ah (ugl) ama shaqsi ahaan, Suura gal maahan inaad ku bixiso wax warqad dhakhtar ah ama dukumiinti soo dejin sharci ah ujeeddadan oo kale awgeed, waxaa jira ilo ka agdhow suuqa oo la jaan qaadaya baahiyahaas oo kale. Marka, ka hor intaadan iibsan alaabta ceyriin ee aad rabto, iskuday inaad hesho xaq iyo aqoonyahan, si aad naftaada uga ilaaliso kuwa been abuurka ah.
1. Sidee loo hubiyaa tayada badeecada intaadan gelin amarada?
A: COA, HPLC, HNMR waa la heli karaa.
B: Waraaqaha imtixaanka ee shaybaarada saddexaad ayaa la siin doonaa waqti waqti.
2. Sidee loo dammaanad qaadayaa in lacagtaadu amaan tahay?
Amar kasta oo ku saabsan budadayada cayriin waa la soo celin karaa ka hor intaan alaabooyinka la dirin.
3.Can ma hubinaysaa helitaanka saadka?
4. Sidee loo bilaabayaa amarrada oo lagu bixiyaa lacag bixinta?
Faa'iidooyinka laga helo daawada Anabolic Steroids Raw
Ma jiro gearshooyinka la tijaabiyey ee ka socda sheybaarada dhulka hoostiisa qaarkood, goorta la rabo inaad naftaada u sameyso
Qiimo jaban oo wareegaaga ah si aad u isticmaasho qalabkaaga iswada. Xitaa qof haysta lacag xaddidan wuxuu gaari karaa riyada dhiska.
In dib loo iibiyo alaabooyinka cayriin ee AAS inay taajir noqoto
Si aad u dhisto sumaddaada oo aad wax uun ugu noqotid goobtan
In la sameeyo cilmi-baaris ku saabsan adeegsiga iyo caawinta dadka kale.
DECA budada-Ultimate Guide Sida loo sameeyo Nandrolone Decanoate (Durabolin) MK-677 (Ibutamoren) miyuu si fiican ugu shaqeeyaa Dhismaha Muscle? Dib u eegista Sarm [2019 NEW]